Gaadiidleyda Muqdisho iyo dawladda hoose oo isku dheggan maalmahan,sabab | Baydhabo Online
Gaadiidleyda Muqdisho iyo dawladda hoose oo isku dheggan maalmahan,sabab
Sanadkiiba Afar jeer ayey Dowladda hoose iyo Wasaaradda maaliyadda ka qaadaan lacago Gaadiidka Dadweynaha kuwaas oo Gaadiidleyda 3dii biloodba mar ay bixiyaan.
Sanadkan cusub ee shalay Billowday waxaa ay Mas’uuliyiinta Dowladda hoose iyo Wasaaradda Maaliyadda billaabeen in ay Gaadiidleyda ku amraan bixinta lacagahaas saddex biloodlayaasha ah.
Waxaa jira Gaadiidley ka tuhun qaba in lacagahaas aysan ahayn kuwa ku habboon hadda maadaama doorasho la gelayao islamarkaana ka cabsi qaba in looga faa’ideysto isbeddelka socda.
Gaadiidleyda qaar marka aad la sheekeysato waxaa ay kuu sheegayaan in ay ka wal walqabaan in marka ay dhalato Dowladda cusub iyo Wasaaradda Maaliyadduba ku soo rogaan lacagta ay hadda bixinayaan iyaga oo markaas ku sheegaya in dowladdii hore ay dhacday.
Intaas kadib ayaa shalay ilaa maanta waxaa ay Gaadiidleyda sameynayaan dhuumasho Waddooyinka qaar,halka kuwo kalena la qabtay oo lagaca qaaday lacagihii ay la baxsanayeen.
Wakiillada Wasaaradda Maaliyadda iyo Dowladda hoose ee u xil saaran ururinta lacagahaas ayaa qab qabanaya Gaadiidleyda ka dhega adeyga lacagta saddex biloodleyda ah.
Mid ka mid ah Gaadiidleyda ayaa u sheegay Mustaqbal Radio,in saddexdii biloodba laga qaado $47 Doollarka Mareykanka ah ayna u dheertahay lacaga soostada ah ee maalinlaha looga qaado taas oo ku dhow laba dollar.
Gaadiidley badan ayaa billaabay in ay xareystaan Gawaarida inta isbeddelka dowladda ka dhacayo,waxaan aay ku doodayaan in lacagta hadda laga qaadayo la weydiinayo iyada oo laba jibbaaran saddexbilood kadib marka ay sheegaan waqtiga ay bixiyeenna ay sugeyso waxba nagama quseeyaan.